एसियाकै धनाड्य मुकेश अम्बानीका छोराछोरीले कति पाउथे पकेट खर्च ? सुनेर पर्नु छक्क हुनेछ रोचक ख – aajnepal
HomeNewsएसियाकै धनाड्य मुकेश अम्बानीका छोराछोरीले कति पाउथे पकेट खर्च ? सुनेर पर्नु छक्क हुनेछ रोचक ख
काठमाडौं । एसियाकै सबैभन्दा धनाड्य व्यक्ति मुकेश अम्बानीको लाईफ स्टाईल कुनै राजा महाराजाले भन्दा कम छैन। अम्बानीकी पत्नी निता आइपिएलकी मलिक हुन् र बेला बेलामा उनि सामाजिक संजालमा चर्चामै रहने गर्छिन्।
तर एसियाकै सबैभन्दा धनाड्य व्यक्ति मुकेश अम्बानीका सन्तान भने मिडियामा आउंदैनन्। उनीहरु क्यामेराको अगाडि बिरलै देखा पर्छन्। उनका दुई छोरा अनन्त र आकाश तथा एक छोरी ईशा रहेकी छन्। अब जानौं, राजा महाराजाले जस्तो लाईफ स्टाइल जिउने अम्बनीले आफ्ना बच्चाहरुलाई कै दिन्थे पकेट खर्च। जब अनन्त, आकाश र ईशा स्कूल लेबलमा पढ्थे उनीहरुले कति पकेट खर्च पाउँथे भन्ने बारे आमा निता अम्बानीले खुलाशा गरेकी छन्।
‘बच्चालाई दिईन्थ्यो मात्र ५ रुपैंयाँ
एक इन्टरभ्यूमा नीताले आफ्ना बच्चाहरुलाई स्कूल पढ्दा आफुले हरेक शुक्रबार ५ रुपैयाँ मार दिने गरेको उल्लेख गरेकी छन्। जसबाट उनीहरुले स्कूलको कन्टिनमा खाना खाने गर्थे। उनले भनिन्, एक दिनको कुरा हो, ‘मेरो छोरा आनन्द दौडेर मसँग आयो र भन्यो, मलाई १० रुपैयाँ चाहियो। अनि मैले सोधेँ किन ? तब उसले मलाई भन्यो – स्कूलमा साथीहरुले मात्रै ५ रुपैयाँ ल्याउँछस् तँ अम्बानीको छोरो होस् की भिखारीको भन्दै मेरो मजाक उडाउछन्’
उनले भनिन्, मलाई यो कुरा सुनेर खासै नराम्रो लागेन, किनकी मुकेशले पैसा बचाउने कला आफ्ना पिताबाट सकेका थिए। जसका कारण उनि सफल पनि भएका छन् र उनले चाहन्छन् कि यो कला आफ्ना सन्तानले पनि सिकुन्।’ नीता अम्बानीले आफ्ना बालबच्चाहरुलाई आम मानिसहरुले जस्तै सामान्य लालन पालन नै गरेको बताईन् जसले गर्दा उनीहरुले जीवनमा पैसा को महत्व पनि बुझुन र दुखको अर्थ पनि भुझुन् भन्ने उनको उदेश्य थियो।